Nicholas Haysom muxuu u gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobag? – Walaal24 Newss
Nicholas Haysom muxuu u gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobag?
January 3, 2019	0	By walaal24
Nicholas Haysom ayaa sheegay in uu Soomaaliya yimid 3-dii October ayna si Wanaagsan u soo dhaweeyeen saraakiil sar sare oo katrisan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waxa uu sheegay in uu la dhacay qorsheyaasha isbaddalada waqtiga dheer ee Xukuumadda iyo sida ay uga go’antahay in ay u fuliso qaab ficil ah ayadoo adeegsanaysa hannaankii lagu gaadhi lahaa.
Soomaaliya ayuu sheegay in ay u socoto dhanka Wanaagsan, balse isku dhacyada siyaasadeed ay u keeni karaan in ay waddadaas ka weecato.
Wuxuu ku ammaaay xafiiska Raysul Wasaaraha dadaallada la dagaallanka musuqmaasuqa, ayna kamid tahay in xukuumaddu ay 9-kii December ku dhawaaqday in ay saxiixdo heshiiska Qaramada Midoobay ee la dagaallanka musuqmaasuqa.
Arrimaha asaasiga ah ee dib u dhiska dalka ayuu ku sheegay in ay kamid yihiin, arrimaha doorashooyinka, dib u eegiska dastuurka, hirgalinta federaalka iyo dib u heshiisiinta.
Hakadka ku yimid wada shaqaynta u dhaxaysa dawladda fedraalka iyo dawladaha Xubnaha ka ah ayuu sheegay in ay ku dhawaaqeen golaha iskaashiga maamul goboleedyada 8-dii September.
Arrintan ayuu sheegay in ay mustaqbalka keeni karto dad u goosta Alshabaab kuwaas oo ka faaidaysanaya qalalaasaha.
Waxa uu sheegay in uu ka xun yahay 15-kii qof ee ku dhintay rabshadahaas uuna kamid ahaa xubin kamid ah baarlamaanka Koonfur galbeed.
Waxa uu si xooggan u canbaareeyey weerarkii hoobiyaha ahaa ee lagu qaaday Xaruntooda Muqdisho laba maalmood kahor.
Wuxuuna intaas raaciyey in aan la aqbali karin weerar kasta oo loogaysto Qaramada Midoobay. Asagoo sheegay in shaqaalihii halkaas ku dhaawacmay ay xaladoodu liidato masuuliyadda weerarkana ay sheegatay Alshabaab . Wuxuuna soo dhaweeyey cambaaraynta Xukuumadda federaalka ah ee weerarkaas.
Al-Shabaab ayuu sheegay in ay wali tahay halka ay khatarta ugu wayni uga imaanayso Soomaaliya.
Dhanka kale dhibaatooyinka gargaarka biniaadannimo ee kajira Soomaaliya ayuu sheegay in ay tahay tan ugu adag dunida.
Waxa uu kusoo gabagabeeyey in Soomaaliya ay dhidibada u aastay sidii ay u samayn lahayd hannaan muhiim ah sanadka 2019. Waxa uu sheegay in qorshihii la dajiyey astaamuhuna ay cadyihiiin.
Si loo gaaro arrimahaas ayuu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay hal dhinac ugasoo wada jeestaan.
Wasaaradda Batroolka Soomaaliya iyo Maalgashadayaal Qatar Ka Socda oo is-afgarad Kala Saxiixday
Kooxda Manchester City oo dhulka ku jiiiday kooxda Liverpool
UN: Dhamaan dhinacyada ku dagaalamaya Yemen danbiyo dagaal bay geysteen!